हरि लामिछाने , १० असार २०७५, आईतवार, १२:१० am
ल्हासा (तिब्बत): प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई चीन र भारतका दुवै सरकारले महत्वपूर्ण भनेका छन् । दुवै मुलुकले सरकारीस्तरमै स्वीकारेका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बनेको सरकारका कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको छदिने औपचारिक भ्रमण समापनको संघारमा तिब्बतको ल्हासामा रासससँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनको सम्बन्ध असाधारण र अभूतपूर्व भएको बताउँछन् ।
धेरै घण्टा काम गर्ने मेरो आदत नै बनेको छ । सत्र–अठार घण्टा काम गर्दा मलाई त्यस्तो असुविधा हुँदैन ।
चीन सरकारले उच्च सम्मानका साथ यहाँलाई स्वागत गर्यो । यो सँगै १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भई नै सकेको छ । सारमा यसबाट हामी कत्तिको उत्साहित हुन सक्छौँ ?
यो भ्रमणको सबैभन्दा चासोको विषय रेलमार्गको थियो । बेइजिङमा भएको सहमतिले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भावनालाई कत्तिको बलियो बनाएको छ ?
विकास एक्लो प्रयासले हुँदैन, मित्र राष्ट्रको सहयोग चाहिन्छ ः प्रम